यसरी भयो अर्जुनको कहानी’मा तयार भएको गीतको रेकर्ड, रुवा’यो सबैको मन (भिडियो हेर्नुहोस)
September 12, 2020 1409
पिठ्युँमा बच्चा बोकेर एकै दिनमा भाइरल बनेका अ’र्जुन बिकले लगातार काम पाइर:हेका छन् । ‌आफ्नो सानो छोरालाई ‌आफैले लगाएको सर्टले पिठ्युँमा बोकी ठेला गु’डाउदै गरेपछि युट्यु’बरले भिडियो खिचेपछि अर्जुन भाइरल बने ।
गायक अर्जुन सापकोटा, पुर्णकला बिसी र विक्रम केसी’को स्वरमा “हाँसो सँगै आँस नि लगि दिएको भए” बोलको मा र्मिक लोकदोहोरी गीत मेशना म्युजिक युट्युब च्यानलबाट बजारमा सार्वजनिक भएको छ ।
केहि समय अगाडि सामा’जिक सञ्जालमा भा इरल बनेका अर्जुन विक:को वास्तविक जीवनमा घटेको घ टनासँग मिल्दो’जुल्दो छ । भिडियोमा पनि उनै अर्जु:न विक र अञ्जलि अधिकारी र निशा राईको जीवन्त अभिनय देख्न सकिन्छ ।
श्रीमान छा डेपछि छोरा’लाई पिठ्युँमा बोकेर रिक्सा चलाउँदै द‌निक गु जारा चलाइरहेका अर्जु’नलाई यतिबेला सुटि’ङमा भ्याइनभ्याई छ । धेरैले उनको वास्तविक जीवनमा आधारित गीतहरु लेखेर भिडियोको पात्रमा पनि उनैलाई छानिरहेको छ ।
भा इरल भइस’केपछि अर्जुनको धेरै भिडि’यो ब’जारमा आइसकेको छ र आउने क्रमपनि जारी रहेको उनी बताउँछन् ।
अमित बाबु रोकायले लेखेको यस गीतमा रोशन परियारले संगीत भरेका छन् भने विनोद बाजुरालीले एरेन्ज गरेका हुन् । विक्रम चौहानको निर्देशनमा बनेको मार्मिक गीतको <a ‘href=”https://youtu.be/5OOVmZaxhAw”>भिडियो हेर्नुहोस ।
अर्जुन अहिले चर्चामा छन् । यसै:बिच उनै अर्जुनको आवाजमा गीत रेकर्ड भएको छ । उनले हालै मात्र ुधोका दिनु’नै थियो तु बोलको मन छुने गीत रेक’र्ड गराएका छन् । हेर्नुहोस् अ’र्जुनले रेकर्ड गर्दाको यो दृश्य
Prevयस्तो लफ’डा परेपछि प्रह’री चौकी पुगीन् युट्युवर सोनिका रोकाया….
Nextभक्तपुरमा घर भित्र कुकुर सहित ३ जनाको ला’श भेटियो….
नेपालकै अयोध्यापुरीमा भगवान् राम जन्मेको ठाउँ र सीता’को पाईला भेटियो (भिडियोसहित)
आज कार्तिक २३ गते आईतबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
ज्ञानेन्द्र शाहिले मध्य रातमा लेखे मनै छुने यस्तो कुरा, हेर्नुहोस्